Health Archives - Shwe Khit
Categories Health, ကွားသိရသမြှ Leaveacomment
သငျအိပျနတေဲ့ ခေါငျးအုံးတှကေို သတိထားပါ…ဒီညပဲ မအိပျခငျ အပျေါဖုံးကို ခြှတျကွညျ့ကွပါ
အသကျ(36)နှဈ အရှယျ ရှိပွီဖွဈတဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယျလကျမအီမသာ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
စီးပှားရေးသမား ဖွဈတာကွောငျ့ ခရီးပနျးတာပဲလို့ ယူဆပွီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနခေဲ့ပမေယျ့ နှဈပတျကွာတဲ့အထိ ဒဏျရာက မသကျသာလို့ သူ့မှာ အဖြားရောဂါရှိနပွေီထငျကာဆေးခနျးကို သှားပွခဲ့ပါတယျ။
ဒေါကျတာရဲ့ စဈဆေးမှု မှာလညျး တဈခွားထူးခွားမှုကို မတှရေ့လို့ အဖြားကဆြေးကို ပေးပွီးပွနျလှတျခဲ့ပါတယျ.
သှေးအဖွကေလညျး ဘာမှ ထူးထူးခွားခွား မရှိခဲ့ပါ။
ဒါပမေယျ့ နောကျတဈရကျအကွာမှာပဲ Stewart ဟာ ခြောငျးဆိုးတဲ့အခါမှာသှေးခဲတှေ ပါလာတာကို တှခေဲ့ရပါတယျ။
အဲဒီအခါမှာတော့ရောဂါကို သသေခြောခြာ စဈဆေးမှုတှေ လုပျခဲ့ရပွီး ရောဂါရဲ့အဖွကေတော့“အဆုတျကို မှိုစှဲ”တဲ့ ရောဂါ ဖွဈ တယျလို့အဖွထှေကျခဲ့ပါတယျ …။
အဆိုပါ မှိုဟာ ဘယျနရောကနေ လူကို ကူးစကျခဲ့သလဲဆိုတာကို ထပျမံ စမျးသပျလိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ အနီးဆုံး ပတျဝနျးကငျြမှာရှိနိုငျပွီး
အထူးသဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ အိပျတဲ့အခါ အုံးတဲ့ ခေါငျးအုံးမှာ ပိုလို့ရှိနိုငျပါတယျအဲဒီ မှိုတှဟော အသကျရှုလမျးကွောငျးကနေ တဈဆငျ့ အဆုတျဆီကို ဝငျရောကျနိုငျဖို့ အရမျးလှယျကူပွီး၊
နမေကောငျးသူ အုံးထားတဲ့ခေါငျးအုံးကို အသုံးပွုမိပါကလညျး အဖြား ဗိုငျးရပျဈနဲ့ အခွား ကူးစကျရောဂါတှေ ကူးစကျနိုငျခြေ ပိုရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
သို့အတှကျကွောငျ့ မိမိ တဈကိုယျရေ အုံးနတေဲ့ ခေါငျးအုံးတှကေို တဈပတျလြှငျ အနညျးဆုံး တဈကွိမျ လောကျလြှျောဖှပျ သနျ့စငျပေးသငျ့ပွီးနစေ့ဉျ နရေောငျကောငျးကောငျးရဲ့အောကျမှာ လှနျးပေးသငျ့ပါတယျ။
နရေောငျဟာ မှိုနဲ့အခွားပိုးမှားမြားကို နှိမျနငျးနိုငျပွီး ဗိုငျးရပျဈကိုလညျး သစေနေိုငျတဲ့အစှမျး ရှိပါတယျ …။
ဒါကွောငျ့ သကျရှညျကနျြးမာတဲ့ ဘဝကို ပိုငျဆိုငျဖို့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တဈကိုယျရသေနျ့ရှငျးမှုနဲ့ အသုံးအဆောငျ ပစ်စညျးတှသေနျ့ရှငျးမှုအရေးကွီးတယျဆိုတာကို ဖျောပွလိုကျပါတယျနျော
(((( ဒီ Post လေးက အသုံးဝငျတယျ ဆိုရငျShare တဈခကျြ လုပျပွီး မြှဝပေေးလိုကျပါ ခငျဗြာ ))))
အသက်(36)နှစ် အရွယ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Stewart Arms ဟာ ကိုယ်လက်မအီမသာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးသမား ဖြစ်တာကြောင့် ခရီးပန်းတာပဲလို့ ယူဆပြီး ပေါ့ပေါ့ဆဆနေခဲ့ပေမယ့် နှစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ ဒဏ်ရာက မသက်သာလို့ သူ့မှာ အဖျားရောဂါရှိနေပြီထင်ကာဆေးခန်းကို သွားပြခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာရဲ့ စစ်ဆေးမှု မှာလည်း တစ်ခြားထူးခြားမှုကို မတွေ့ရလို့ အဖျားကျဆေးကို ပေးပြီးပြန်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်.
သွေးအဖြေကလည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မရှိခဲ့ပါ။
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ရက်အကြာမှာပဲ Stewart ဟာ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာသွေးခဲတွေ ပါလာတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီအခါမှာတော့ရောဂါကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ရပြီး ရောဂါရဲ့အဖြေကတော့“အဆုတ်ကို မှိုစွဲ”တဲ့ ရောဂါ ဖြစ် တယ်လို့အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ် …။
အဆိုပါ မှိုဟာ ဘယ်နေရာကနေ လူကို ကူးစက်ခဲ့သလဲဆိုတာကို ထပ်မံ စမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အနီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနိုင်ပြီး
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အိပ်တဲ့အခါ အုံးတဲ့ ခေါင်းအုံးမှာ ပိုလို့ရှိနိုင်ပါတယ်အဲဒီ မှိုတွေဟာ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကနေ တစ်ဆင့် အဆုတ်ဆီကို ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ အရမ်းလွယ်ကူပြီး၊
နေမကောင်းသူ အုံးထားတဲ့ခေါင်းအုံးကို အသုံးပြုမိပါကလည်း အဖျား ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ အခြား ကူးစက်ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်ချေ ပိုရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သို့အတွက်ကြောင့် မိမိ တစ်ကိုယ်ရေ အုံးနေတဲ့ ခေါင်းအုံးတွေကို တစ်ပတ်လျှင် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် လောက်လျှော်ဖွပ် သန့်စင်ပေးသင့်ပြီးနေ့စဉ် နေရောင်ကောင်းကောင်းရဲ့အောက်မှာ လှန်းပေးသင့်ပါတယ်။
နေရောင်ဟာ မှိုနဲ့အခြားပိုးမွှားများကို နှိမ်နင်းနိုင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလည်း သေစေနိုင်တဲ့အစွမ်း ရှိပါတယ် …။
ဒါကြောင့် သက်ရှည်ကျန်းမာတဲ့ ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုနဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေသန့်ရှင်းမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်နော်
(((( ဒီ Post လေးက အသုံးဝင်တယ် ဆိုရင်Share တစ်ချက် လုပ်ပြီး မျှဝေပေးလိုက်ပါ ခင်ဗျာ ))))
ထကျခွမျးခှဲထားသော ကွကျသှနျနီ ကို ခကျြခငျြးအသုံးမပွုနိုငျပဲ ရကျကြျောလှနျသှားလြှငျပွနျ၍အသုံးမပွုသငျ့ပါ။ မစားသငျ့ပါ။
အန်တရာယျ ကို ဖွဈစပေါသညျ။ ခှဲခွမျးထားပွီး အပွငျမှာ အနညျးဆုံး ၆ နာရီနှငျ့ အထကျကွာသှားသညျ့ ၎င်းငျးကွကျသှနျနီခွမျးဟာ
အပုတျနံ့မြား၊ အနဲ့ဆိုးမြားကို စုပျထားထားနိုငျပွီး ဘတျတီးရီးယားပိုးမှားမြားနှငျ့ အခွား အန်တရာယျကို ဖွဈစတေတျသညျ့ ပိုးမှားမြားလညျး ပါရှိလာသညျ့အတှကျ ဝမျးပကျြ၊ ဝမျးလြှော၊ ပိုကျအောငျ့၊ ပိုကျနာဖွဈနိုငျသညျ့အပွငျ အဆိပျအတောကျကိုလညျး ဖွဈစနေိုငျပါတယျလို့ နိုငျငံတကာ ကနျြးမာရေးစာမကျြနှာမြားမှာ
ထက်ခြမ်းခွဲထားသော ကြက်သွန်နီ ကို ချက်ချင်းအသုံးမပြုနိုင်ပဲ ရက်ကျော်လွန်သွားလျှင်ပြန်၍အသုံးမပြုသင့်ပါ။ မစားသင့်ပါ။
အန္တရာယ် ကို ဖြစ်စေပါသည်။ ခွဲခြမ်းထားပြီး အပြင်မှာ အနည်းဆုံး ၆ နာရီနှင့် အထက်ကြာသွားသည့် ၎င်းကြက်သွန်နီခြမ်းဟာ
အပုတ်နံ့များ၊ အနဲ့ဆိုးများကို စုပ်ထားထားနိုင်ပြီး ဘတ်တီးရီးယားပိုးမွှားများနှင့် အခြား အန္တရာယ်ကို ဖြစ်စေတတ်သည့် ပိုးမွှားများလည်း ပါရှိလာသည့်အတွက် ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော၊ ပိုက်အောင့်၊ ပိုက်နာဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် အဆိပ်အတောက်ကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ကျန်းမာရေးစာမျက်နှာများမှာ
“ဆေးနညျး (၁၀၀) အိမျသုံးဆေးမွီးတို မှတျစုမြား….
ပါးစပျ နှုတျခမျး တို့၌ ရယေုံပေါကျ…….လေးညုငျးပှငျ့သှေးလိမျး၊
ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှော အားကုနျခမျး…….ဧကရာဇျမွဈကို ဆနျဆေးရေ နဲ့ သှေးသောကျ၊ မကြီးခေါကျသှေးသောကျ၊
မုတ်တယောငျ (ဝှေးဥယောငျ)ကဆြေး…….ဝကျကွိမျရှကျနဲ့ဆနှငျးစိမျးတကျ ရောထောငျး အုံ၍ပတျတီးစညျး၊ ရဆှေတျဆှတျပေး၊
နှလုံးရောဂါ ရုတျတရကျ မော ကွပျ အောငျ့…….(1)ဂငျြးစိမျးကိုဆားနဲ့တို့စား (လကျမလောကျ)၊ (2) မိတျသလငျကိုဆားနဲ့တို့စား (လကျမလောကျ)၊ ရအေေးတဝသောကျ၊
အိပျမပြျောလြှငျ……ဒနျကြှဲပငျပွုပျသောကျ၊ မဲဇလီရှကျဟငျးခြိုခကျြသောကျ၊ လကျသုတျ သုတျစား၊
သားအိမျကိုကျ အကွောတကျ…… သကျရငျးကွီးမွဈ(သို့)အခေါကျ (၁၀)ဇှနျး၊ (2)ဆငျသမနှယျသှေးသောရညျ (၂၀)ဇှနျး ရောစပျ၍သောကျ၊
သှေးပဈြ သှေးခဲလှနျးလြှငျ…….ရှောကျရညျ သံပုရာရညျ တဈဝသောကျ၊ ကငျပှနျးခဉျြရှကျကွမျးကကြကြွိုသောကျ၊
ကြောကျတညျရောဂါ….. ကြောကျကှဲပွုတျသောကျ၊ သံမနိူငျကြောကျမနိူငျဆေးသောကျ၊ ကဒကျခေါကျကို သံပုရာရညျနဲ သှေးသောကျ၊ ငါးဦးခေါငျး၌ရှိသော ကြောကျကလေးမြားကို မွအေိုးထဲထညျ့၍လှျော (မီးမကြှမျးစရေ) နီရဲလာလြှငျသံပုရာရညျနဲ့ပကျဖနျြး (သို့)သံပုရာရညျထဲသို့သှနျထညျ့ ကွမှေသှားသော ကြောကျမှုနျ့မြားကို ခငျြ့ခြိနျသောကျ၊
ရငျပွညျ့အစာမကြေ လေးလံ အဝလှနျ အကွောတကျ အဆီကဆြေး
(6)ကငျပှနျးခဉျြရှကျရငျ့လေးတူဆတူကြိုသောကျ (၆ ပါးဆေး)
ခြောငျးဆိုးလြှငျ…. ခရပှေငျ့ကိုတညလုံးရစေိမျ၊ နံနကျတှငျ ထိုရကေိုစဈ၍သောကျပါ ၊ပြောကျ၏ ။
ရငျပွညျ့ရငျကယျ .. ကွကျဟငျးခါးသကျစောငျ့ဆေးကို နှမျးဆီ –ပရုပျဆီဖွူ ဖွငျ့ဖြျော၍ ရငျကိုအသာအယာသပျပါ။
နှာပိတျသျော…..ကွိတျမှနျရှကျ ခှေးသေးပနျးရှကျ နှဈပါးကွိတျ ၊ ရှိနျးခိုနဲနဲထညျ့ ၊ ငယျထိပျမှနှာခေါငျးအထိ ဆေးအရညျနှငျ့ဆှဲပေးပါ ။
တကျလြှငျ……ဆငျငိုမွကျပွုပျရညျကိုတိုကျပါ ။ အတကျခကျြခငျြးကသြှားမညျ ။
ရငေတျဝမျးကြ …..ဆီးသီးအစအေ့တှငျးမှအဆနျကို အမှုနျ့ပွု၍ နှယျခြိုနှငျ့ရောပွီးစားပေးပါ ။
ကငျးထိုးသျော……. ကငျးကိုကျ ကငျးထိုး ဒဏျရာ ငဖွူကွီးမွဈသှေးလိမျးပါ ။
ကွို့ထိုးလြှငျ……ကွကျသှနျးနီကိုထနျးလြှကျနှငျ့နိုငျးခငျြး ကွိတျ၍စား ။
ခရုသငျး….. ကညျြးသီးဆနျကို ဆနျဆေးရညျနှငျ့တှဲစပျ၍ ရကျပေါငျးမြားစှာစားရပါသညျ ။
ခွတေုနျလကျတုနျဖွဈလြှငျ…. ကွိတျမှနျရှကျယိုထိုးစားပြောကျ၏ ။
ခါးနာ ခါးကိုကျ…… ညောငျခွထေောကျပငျ၏ နို့စေးရညျလိမျးပေးပါ ။
ငှကျဖြားထလြှငျ …. မွငျးခှာရှကျရညျကို ငရုပျကောငျးနှငျ့အမြှစီကွိတျ၍ သောကျပါ ။
ခေါငျးတခွမျးကိုကျလြှငျ……. ကညျြးသီးဆနျကို ဆိတျကငျြငယျရညျနှငျ့သှေးလိမျးပေးပါ ။
စကားထဈလြှငျ……နံနကျတိုငျးမွငျးခှာရှကျ တဈရှကျနှဈရှကျလောကျ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။
စအိုယားနာ…. ကွိတျမှနျရှကျ အရညျညှဈ၍ စအိုဝတှငျ သုံးလေးကွိမျသုပျလိမျးပေးပါ ၊ ဝမျးတှငျးရှိ ပိုးမြားကဆြငျးလာပါလိပျမညျ ။
ဆီးခြုပျလြှငျ…. ငုပငျ၏ အနှစိုကိုသှေး၍ ခကျြအောကျမကွာခဏ လိမျးပေးပါ ။
ဆီးတစကျစကျကလြှငျ… ကွကျသှနျနီကိုပွုပျ၍ အရညျကိုသောကျပေးပါ ။
ဆီးခြုပျလြှငျ …… ဆီးမြားစရေနျ ကွကျသှနျနီ အစိမျးမြားမြား စားပေးပါ ။
ဆီးအောငျ့ကြောကျတညျလြှငျ…… ကွာဟငျးရှကျကိုနှားနို့ နှငျ့သကွားရော၍ နစေ့ဉျစားပေးပါ ။
ဆီးခြိုဖွဈလြှငျ …. ခံတကျခေါကျကို လေးခှကျတဈခှကျတငျကြို၍ သောကျပါ ။
ဆီးအနှဈကလြှငျ….. သင်ျဘော ရှကျ သုံးရှကျကို ထနျးလကျြ သုံးခဲ ၊ဆားအနညျးငယျ ထညျ့ ၊ သုံးခှကျတဈခှကျတငျကြို၊ တနလေုံ့းသောကျပေးပါ ။
ဆီးပူလြှငျ…. ဆီးသှားသောအခါ ပူလိုကျတာ စားပါ ဗူးသီးပွုတျ။
ဆံပငျပွနျပေါကျဆေး…… သံပုရာစကေို့ရနှေငျ့ကွိတျ ၊ နစေ့ဉျဆံပငျကိုလိမျးပေးပါ ၊ ဆံပငျပွနျပေါကျ၏။
တငျးတိပျ…. နနှငျးနှငျ့ ငဖွူကွီးအစေးကိုသှေးလိမျးပေးပါ ။
ဓာတျခြုပျလြှငျ …… ထနျးလကျြနဲ့မနျကြီး ကို ဆားမွတျမွတျထညျ့၍ တညျပွီးစားလြှငျ ဝမျးသကျ ဝမျးမှနျ၏ ။
နားကိုကျလြှငျ…..ကွကျသှနျနီကိုမီးဖုတျ ၊ အရညျနှေးနှေးနားထဲထညျ့ နားကိုကျခွငျးပြောကျ၏ ။
နားအူ နားလထှေကျလြှငျ…. သဘောင်ျရှကျ မီးအုံး၍ အတို့အမွှုပျလုပျစားပေးပါ ။
နားပွညျယိုလြှငျ…. ကြီးအာသီးကွိတျဖတျကို အုနျးဆီနှငျ့ရော၍ကွကျတောငျနှငျ့ကပျြပေးပါ။
နားအတှငျးပိုးကောငျဝငျလြှငျ…. ခရမျးကစော့သီးကိုမီးရှို့ပွီး အခိုးခံ မုနျညငျးဆီနှငျ့နားကိုကပျြပေးပါ ။
နို့ကွောငျးပိတျလြှငျ…. ကွိတျမှနျရှကျကို ငါးကွငျးသားကငျနဲ့ ခကျြစားပေးပါ ။
နို့လှိုငျလှိုငျထှကျဆေး…… စမွိတျစကေို့ လှျော၍စားလငျြနို့ထှကျကောငျး၏။
နှလုံးရောဂါဖွဈလြှငျ.. ခရပေငျ၏အခေါကျပွုတျရညျကို သောကျပါ ၊ အပှငျ့ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမွဈပွတျပြောကျ၏ ။
နှခေါငျးသှေးလြှံလြှငျ…… ငှကျပြောပငျမှ ထှကျသော အစေးကို ရှူပေးပါ ။
နှာခေါငျးအနံ့ မရသောရောဂါ ဖွဈလြှငျ. … ကွိတျမှနျရှကျ ညှဈ၍ရသောအရညျကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။
ဆေးနညျး ၁၀၀၀ စာအုပျမှ ကူးယူမြှဝသေညျ။
“ဆေးနည်း (၁၀၀) အိမ်သုံးဆေးမြီးတို မှတ်စုများ….
ပါးစပ် နှုတ်ခမ်း တို့၌ ရေယုံပေါက်…….လေးညုင်းပွင့်သွေးလိမ်း၊
ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော အားကုန်ခမ်း…….ဧကရာဇ်မြစ်ကို ဆန်ဆေးရေ နဲ့ သွေးသောက်၊ မကျီးခေါက်သွေးသောက်၊
မုတ္တယောင် (ဝှေးဥယောင်)ကျဆေး…….ဝက်ကြိမ်ရွက်နဲ့ဆနွင်းစိမ်းတက် ရောထောင်း အုံ၍ပတ်တီးစည်း၊ ရေဆွတ်ဆွတ်ပေး၊
နှလုံးရောဂါ ရုတ်တရက် မော ကြပ် အောင့်…….(1)ဂျင်းစိမ်းကိုဆားနဲ့တို့စား (လက်မလောက်)၊ (2) မိတ်သလင်ကိုဆားနဲ့တို့စား (လက်မလောက်)၊ ရေအေးတဝသောက်၊
အိပ်မပျော်လျှင်……ဒန်ကျွဲပင်ပြုပ်သောက်၊ မဲဇလီရွက်ဟင်းချိုချက်သောက်၊ လက်သုတ် သုတ်စား၊
သားအိမ်ကိုက် အကြောတက်…… သက်ရင်းကြီးမြစ်(သို့)အခေါက် (၁၀)ဇွန်း၊ (2)ဆင်သမနွယ်သွေးသောရည် (၂၀)ဇွန်း ရောစပ်၍သောက်၊
သွေးပျစ် သွေးခဲလွန်းလျှင်…….ရှောက်ရည် သံပုရာရည် တစ်ဝသောက်၊ ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ကြမ်းကျကျကြိုသောက်၊
ကျောက်တည်ရောဂါ….. ကျောက်ကွဲပြုတ်သောက်၊ သံမနိူင်ကျောက်မနိူင်ဆေးသောက်၊ ကဒက်ခေါက်ကို သံပုရာရည်နဲ သွေးသောက်၊ ငါးဦးခေါင်း၌ရှိသော ကျောက်ကလေးများကို မြေအိုးထဲထည့်၍လှော် (မီးမကျွမ်းစေရ) နီရဲလာလျှင်သံပုရာရည်နဲ့ပက်ဖျန်း (သို့)သံပုရာရည်ထဲသို့သွန်ထည့် ကြေမွသွားသော ကျောက်မှုန့်များကို ချင့်ချိန်သောက်၊
ရင်ပြည့်အစာမကျေ လေးလံ အဝလွန် အကြောတက် အဆီကျဆေး
(6)ကင်ပွန်းချဉ်ရွက်ရင့်လေးတူဆတူကျိုသောက် (၆ ပါးဆေး)
ချောင်းဆိုးလျှင်…. ခရေပွင့်ကိုတညလုံးရေစိမ်၊ နံနက်တွင် ထိုရေကိုစစ်၍သောက်ပါ ၊ပျောက်၏ ။
ရင်ပြည့်ရင်ကယ် .. ကြက်ဟင်းခါးသက်စောင့်ဆေးကို နှမ်းဆီ –ပရုပ်ဆီဖြူ ဖြင့်ဖျော်၍ ရင်ကိုအသာအယာသပ်ပါ။
နှာပိတ်သော်…..ကြိတ်မှန်ရွက် ခွေးသေးပန်းရွက် နှစ်ပါးကြိတ် ၊ ရှိန်းခိုနဲနဲထည့် ၊ ငယ်ထိပ်မှနှာခေါင်းအထိ ဆေးအရည်နှင့်ဆွဲပေးပါ ။
တက်လျှင်……ဆင်ငိုမြက်ပြုပ်ရည်ကိုတိုက်ပါ ။ အတက်ချက်ချင်းကျသွားမည် ။
ရေငတ်ဝမ်းကျ …..ဆီးသီးအစေ့အတွင်းမှအဆန်ကို အမှုန့်ပြု၍ နွယ်ချိုနှင့်ရောပြီးစားပေးပါ ။
ကင်းထိုးသော်……. ကင်းကိုက် ကင်းထိုး ဒဏ်ရာ ငဖြူကြီးမြစ်သွေးလိမ်းပါ ။
ကြို့ထိုးလျှင်……ကြက်သွန်းနီကိုထန်းလျှက်နှင့်နိုင်းချင်း ကြိတ်၍စား ။
ခရုသင်း….. ကျည်းသီးဆန်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့်တွဲစပ်၍ ရက်ပေါင်းများစွာစားရပါသည် ။
ခြေတုန်လက်တုန်ဖြစ်လျှင်…. ကြိတ်မှန်ရွက်ယိုထိုးစားပျောက်၏ ။
ခါးနာ ခါးကိုက်…… ညောင်ခြေထောက်ပင်၏ နို့စေးရည်လိမ်းပေးပါ ။
ငှက်ဖျားထလျှင် …. မြင်းခွာရွက်ရည်ကို ငရုပ်ကောင်းနှင့်အမျှစီကြိတ်၍ သောက်ပါ ။
ခေါင်းတခြမ်းကိုက်လျှင်……. ကျည်းသီးဆန်ကို ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်နှင့်သွေးလိမ်းပေးပါ ။
စကားထစ်လျှင်……နံနက်တိုင်းမြင်းခွာရွက် တစ်ရွက်နှစ်ရွက်လောက် နေ့စဉ်စားပေးပါ ။
စအိုယားနာ…. ကြိတ်မှန်ရွက် အရည်ညှစ်၍ စအိုဝတွင် သုံးလေးကြိမ်သုပ်လိမ်းပေးပါ ၊ ဝမ်းတွင်းရှိ ပိုးများကျဆင်းလာပါလိပ်မည် ။
ဆီးချုပ်လျှင်…. ငုပင်၏ အနှစိုကိုသွေး၍ ချက်အောက်မကြာခဏ လိမ်းပေးပါ ။
ဆီးတစက်စက်ကျလျှင်… ကြက်သွန်နီကိုပြုပ်၍ အရည်ကိုသောက်ပေးပါ ။
ဆီးချုပ်လျှင် …… ဆီးများစေရန် ကြက်သွန်နီ အစိမ်းများများ စားပေးပါ ။
ဆီးအောင့်ကျောက်တည်လျှင်…… ကြာဟင်းရွက်ကိုနွားနို့ နှင့်သကြားရော၍ နေ့စဉ်စားပေးပါ ။
ဆီးချိုဖြစ်လျှင် …. ခံတက်ခေါက်ကို လေးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၍ သောက်ပါ ။
ဆီးအနှစ်ကျလျှင်….. သင်္ဘော ရွက် သုံးရွက်ကို ထန်းလျက် သုံးခဲ ၊ဆားအနည်းငယ် ထည့် ၊ သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကျို၊ တနေ့လုံးသောက်ပေးပါ ။
ဆီးပူလျှင်…. ဆီးသွားသောအခါ ပူလိုက်တာ စားပါ ဗူးသီးပြုတ်။
ဆံပင်ပြန်ပေါက်ဆေး…… သံပုရာစေ့ကိုရေနှင့်ကြိတ် ၊ နေ့စဉ်ဆံပင်ကိုလိမ်းပေးပါ ၊ ဆံပင်ပြန်ပေါက်၏။
တင်းတိပ်…. နနွင်းနှင့် ငဖြူကြီးအစေးကိုသွေးလိမ်းပေးပါ ။
ဓာတ်ချုပ်လျှင် …… ထန်းလျက်နဲ့မန်ကျီး ကို ဆားမြတ်မြတ်ထည့်၍ တည်ပြီးစားလျှင် ဝမ်းသက် ဝမ်းမှန်၏ ။
နားကိုက်လျှင်…..ကြက်သွန်နီကိုမီးဖုတ် ၊ အရည်နွေးနွေးနားထဲထည့် နားကိုက်ခြင်းပျောက်၏ ။
နားအူ နားလေထွက်လျှင်…. သဘောင်္ရွက် မီးအုံး၍ အတို့အမြှုပ်လုပ်စားပေးပါ ။
နားပြည်ယိုလျှင်…. ကျီးအာသီးကြိတ်ဖတ်ကို အုန်းဆီနှင့်ရော၍ကြက်တောင်နှင့်ကျပ်ပေးပါ။
နားအတွင်းပိုးကောင်ဝင်လျှင်…. ခရမ်းကစော့သီးကိုမီးရှို့ပြီး အခိုးခံ မုန်ညင်းဆီနှင့်နားကိုကျပ်ပေးပါ ။
နို့ကြောင်းပိတ်လျှင်…. ကြိတ်မှန်ရွက်ကို ငါးကြင်းသားကင်နဲ့ ချက်စားပေးပါ ။
နို့လှိုင်လှိုင်ထွက်ဆေး…… စမြိတ်စေ့ကို လှော်၍စားလျင်နို့ထွက်ကောင်း၏။
နှလုံးရောဂါဖြစ်လျှင်.. ခရေပင်၏အခေါက်ပြုတ်ရည်ကို သောက်ပါ ၊ အပွင့်ကိုရှူ ၊အသီးကို စားပေးပါ အမြစ်ပြတ်ပျောက်၏ ။
နှခေါင်းသွေးလျှံလျှင်…… ငှက်ပျောပင်မှ ထွက်သော အစေးကို ရှူပေးပါ ။
နှာခေါင်းအနံ့ မရသောရောဂါ ဖြစ်လျှင်. … ကြိတ်မှန်ရွက် ညှစ်၍ရသောအရည်ကို ခဏ ခဏရှူပေးပါ ။
ဆေးနည်း ၁၀၀၀ စာအုပ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
တနျဖိုးကွီးသောဆေးပှငျ့ မူးဝငေိုကျမဉျြးခွငျးကို ပယျပြောကျစနေိုငျပွီး စိတျကိုကွညျနူးစသေော ဆေးပှငျ့။ သှေးဆေးဖျောစပျရာတှငျ အသုံးပွုသော ဆေးပှငျ့ဖွဈသညျ။ဆိပျဖလူးပငျ၏ ပ ဉ်စငါးပါးသညျ ဆံပငျကို အကြိုးပွုသညျ။
ဆံပငျကြှတျသောရောဂါကို ကောငျး၏။မီးယပျ သှေးလှနျ၊ မွငျးသရိုကျရောဂါ၊ အဆဈရောငျ၊ သုတျအားနညျးခွငျး၊ ဆီးလှနျရောဂါ၊ ကလေးသနျထိုးသောရောဂါ၊ တိရိစ်ဆာနျမြား အဆိပျသငျ့သောရောဂါတို့ကို ပြောကျကငျးစသေညျ။ ကိုယျဝနျကို ကွီးထှားစသေညျ။
(၁)ဆိပျဖလူးပှငျ့ကိုစုဆောငျး အမှုနျ့ကွိတျ၍ သကွားနှငျ့ ရောစပျ၍ နလေ့ယျ လဖကျစားဇှနျး တဈဇှနျးမှနျမှနျသောကျပါက အမြိုးသားမြား သုတျသှေးအားကောငျးစသေညျ။
(၂)ဆိပျဖလူးပှငျ့ကို သကွားနှငျ့ကွျောစားလြှငျ မိနျးမတို့ ဘုနျးဆံထုံးဆိုသညျ့အတိုငျး အမြိုးသမီးမြား ဆံပငျကောငျးစေ သနျစသေညျ။
(၃)ဆိပျဖလူးပှငျ့ကို ကွကျသားနှငျ့ကွျောစားလငျြ ကိုယျဝနျကိုကွီးထှားစသေညျ။ သနျမာထှားကြိုငျးသော သားသမီးရတနာ၏ မိခငျဖွဈမညျ။
(၄)ဆိပျဖလူးပှငျ့ သတ်တရညျကို ဆနျဆေးရညျနှငျ့ သကွားအနညျးငယျခပျသောကျပါက အပုပျဆနျသောရောဂါပြောကျသညျ။
(၅)ဆိပျဖလူးပှငျ့နုနုလကျတဈဆုပျနှငျ့ ငရုတျကောငျး (၇)စေ့ ကွိတျ၍ သောကျလြှငျ အမြိုးသမီး မြားမီးယပျသှေးလှနျ ပြောကျ၏။
(၆)ဆိပျဖလူးပှငျ့အခွောကျကို လဖကျခွောကျသဖှယျသောကျသျော အဆဈရောငျရောဂါ ပြောကျ၏။(မှတျခကျြ ဓာတျဘူးထဲက ညသိပျရနှေေးမသောကျပါနှငျ့)
(၇)အရပွေားပျေါမှာဖွဈသော ယားနာအမြိုးမြိုးတို့အတှကျ ဆိပျဖလူးပှငျ့ကို နို့(သို့)နို့မှုနျ့နှငျ့ ကွိတျ၍ လိမျးပေးပါက ပြောကျသညျ။
(၈)ဦးခေါငျး၌ဖွဈသော ဒကျကို ဆိပျဖလူးပှငျ့ခွောကျ အုနျးဆီနှငျ့ခကျြ၍ လိမျးပေးလြှငျသကျသာပြောကျကငျးသညျ။
(၉)ဆိပျဖလူးရှကျသတ်တုရညျတှငျ ဆားခပျ၍ လဖကျရညျဇှနျးတဈဇှနျး တိုကျပါက သနျကောငျမြား အထှေးလိုကျ ကဆြငျးစပေါသညျ။
(၁၀)ဆိပျဖလူးရှကျ သုံးခှကျတဈခှကျတငျ ကြိုသောကျပါက ဆီးခဏခဏသှားရသော ဆီးလှနျရောဂါဝဒေ နာကို သကျသာပြောကျကငျးစပေါသညျ။
ရောဂါဆယ်မျိူးကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိတဲ့ ဆိပ်ဖလူးပင်၊ အပွင့်၊ အခေါက်
တန်ဖိုးကြီးသောဆေးပွင့် မူးဝေငိုက်မျဉ်းခြင်းကို ပယ်ပျောက်စေနိုင်ပြီး စိတ်ကိုကြည်နူးစေသော ဆေးပွင့်။ သွေးဆေးဖော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဆေးပွင့်ဖြစ်သည်။ဆိပ်ဖလူးပင်၏ ပ ဉ္စငါးပါးသည် ဆံပင်ကို အကျိုးပြုသည်။
ဆံပင်ကျွတ်သောရောဂါကို ကောင်း၏။မီးယပ် သွေးလွန်၊ မြင်းသရိုက်ရောဂါ၊ အဆစ်ရောင်၊ သုတ်အားနည်းခြင်း၊ ဆီးလွန်ရောဂါ၊ ကလေးသန်ထိုးသောရောဂါ၊ တိရိစ္ဆာန်များ အဆိပ်သင့်သောရောဂါတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသည်။ ကိုယ်ဝန်ကို ကြီးထွားစေသည်။
(၁)ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကိုစုဆောင်း အမှုန့်ကြိတ်၍ သကြားနှင့် ရောစပ်၍ နေ့လယ် လဖက်စားဇွန်း တစ်ဇွန်းမှန်မှန်သောက်ပါက အမျိုးသားများ သုတ်သွေးအားကောင်းစေသည်။
(၂)ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို သကြားနှင့်ကြော်စားလျှင် မိန်းမတို့ ဘုန်းဆံထုံးဆိုသည့်အတိုင်း အမျိုးသမီးများ ဆံပင်ကောင်းစေ သန်စေသည်။
(၃)ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို ကြက်သားနှင့်ကြော်စားလျင် ကိုယ်ဝန်ကိုကြီးထွားစေသည်။ သန်မာထွားကျိုင်းသော သားသမီးရတနာ၏ မိခင်ဖြစ်မည်။
(၄)ဆိပ်ဖလူးပွင့် သတ္တရည်ကို ဆန်ဆေးရည်နှင့် သကြားအနည်းငယ်ခပ်သောက်ပါက အပုပ်ဆန်သောရောဂါပျောက်သည်။
(၅)ဆိပ်ဖလူးပွင့်နုနုလက်တစ်ဆုပ်နှင့် ငရုတ်ကောင်း (၇)စေ့ ကြိတ်၍ သောက်လျှင် အမျိုးသမီး များမီးယပ်သွေးလွန် ပျောက်၏။
(၆)ဆိပ်ဖလူးပွင့်အခြောက်ကို လဖက်ခြောက်သဖွယ်သောက်သော် အဆစ်ရောင်ရောဂါ ပျောက်၏။(မှတ်ချက် ဓာတ်ဘူးထဲက ညသိပ်ရေနွေးမသောက်ပါနှင့်)
(၇)အရေပြားပေါ်မှာဖြစ်သော ယားနာအမျိုးမျိုးတို့အတွက် ဆိပ်ဖလူးပွင့်ကို နို့(သို့)နို့မှုန့်နှင့် ကြိတ်၍ လိမ်းပေးပါက ပျောက်သည်။
(၈)ဦးခေါင်း၌ဖြစ်သော ဒက်ကို ဆိပ်ဖလူးပွင့်ခြောက် အုန်းဆီနှင့်ချက်၍ လိမ်းပေးလျှင်သက်သာပျောက်ကင်းသည်။
(၉)ဆိပ်ဖလူးရွက်သတ္တုရည်တွင် ဆားခပ်၍ လဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း တိုက်ပါက သန်ကောင်များ အထွေးလိုက် ကျဆင်းစေပါသည်။
(၁၀)ဆိပ်ဖလူးရွက် သုံးခွက်တစ်ခွက်တင် ကျိုသောက်ပါက ဆီးခဏခဏသွားရသော ဆီးလွန်ရောဂါဝေဒ နာကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။